Haddii shirkaddaadu ay kacday waxaan ilaalineynaa in wax walba ay si sax ah u dhacaan | Kronofogden
Marka laga hadlayo shirkad ay ku adagtahay in ay iska bixiso faatuurooyinkeeda, waxaa jira jidad kala duwan oo la maro si xal loo helo. Mararka qaarkood waddada keliya ee la mari karo waa in kicitaan la codsado. Marka ay kicidu jirto waxaan hubineynaa in kicitaanka si sax ah loo maareeynayo.
Maxay tahay hawsha Kronofogden ee ku aaddan kicitaanka?
Mid ka mid ah hawlaheennu waa in aan koontaroolnaa maamulidda kicitaanka, si hantida haraaga ah ee shirkadda kaceysa loo maareeyo si sax ah:
Haddii ay jiraan wax aan ka qabno sida kicitaanka loo maareynayo waxaan dalban karnaa in cidda meereyneysa kicitaankaagu ay lacag yar qaadato.
Waxaan xitaa hubin karnaa in kicitaanka la soo afjaro sida ugu dhakhsi badan ee suurta gal ah.
Haddii shirkaddu ay shaqaale leedahay laakin lacagta ay haysato aysan mushaar ku filneyn, waxay badbaado ku leeyihiin damaanad qaadka mushaarka ee xukuumadda. Waxay taasi ka dhigantahay in xukuumaddu ay mushaaraadka siin karto shaqaalahaaga. Waxay taasi khuseysaa mushaaraadka ay shaqeysteen seddaxdi bilood ee ka horreysay inti codsiga kicitaanka aan loo gudbin maxkamadda derejada koowaad.
Waxaan koontarooleynaa sida ay maamulayaasha kicitaanku wax u maareynayaa ay si sax ah u dhaceyso.